Makombiyuta, Operating hurongwa
The hwindo "Mhanyai" iri Windows 8 kushandisa "Start" bhatani, haugoni kudana. Ichi Muterere chinhu hadzisi rinowanikwa shanduro iyi uchishandisa hurongwa. Saizvozvowo, akapa nzira itsva pahwindo achidana Os, iyo ichakurukurwa zvakadzama munyaya.
Nzira yokugadzirisa dambudziko
The hwindo "Mhanyai" muna Windows 8, unogona kudana nenzira dzinotevera:
Kushandisa dzakananga mubatanidzwa makiyi ari kiibhodhi ( «Win» Chirungu uye «R» tsamba).
Tiine Muterere "Zvirongwa".
With Chikumbiro kunotoda «Win» uye Chirungu tsamba "X".
Mumwe nomumwe pamusoro nzira ichakurukurwa zvakadzama ichi ongororo zvinhu. Kutipawo kurumbidza kwavo kushandiswa uchidzidzira.
Shandisa kiibhodhi General
Nyore nzira kuvhura hwindo "Mhanyai" iri Windows 8 ane zvikuru kungoitwa chinangwa ichi kunotoda. Nzira iyi inoshanda shanduro ino Software inobva "Microsoft" kwokutanga. Ndiko, zviri pasi nokudenga, kusiyana avo izvo zvichashandiswa kurondedzerwa pashure. Vari vasiyana yakanatsa uchishandisa hurongwa, uye kushandisa dzimwe "windose" nadzurudzo hazvibviri.
Sezvinongoita kwema vakawanda shanduro ino wegadziriro software, somumwe kiyi inoshandiswa "windose" (imwe chete vakarondedzera Logo Os) nokuti murayiro "Mhanyai" muna Windows 8. Hot makiyi ari shanduro iyi Os nyore ndaisa.
The bhatani rechipiri - tsamba Chirungu «R». Vakabatisisa ndichisunga kune basa mutauro iyi. Ndizvo mubatanidzwa yakadaro inogona kushandiswa kana Russian kana mumwe mutauro. Zvinofanira startup nepahwindo "Mhanyai" ndouyu: tinoenderera "windose" uye, pasina muchisunungura nayo, kuvaparadzanisa Chirungu tsamba «R». Ipapo uende navo. Pakarepo zvichiratidzika zvakafanira kuti bhokisi isu.
Musimboti yechipiri kiyi
Apo "Mhanyai" iri Windows 8? Funga yokudimbudzira yechipiri unokubvumira kuvhura "Start" Muterere iri shanduro iyi hurongwa software. Sezvaiitwa yapfuura nyaya, chikamu vakati coupling rinosanganisira bhatani "Vindovs". Asi wechipiri kwavo - ndiyo tsamba Chirungu "X". Saka, murayiro akadzika murayiro "Mhanyai" hazvisi sezvinotevera:
Bata bhatani kuti "windose" Logo pakudzika mutsara pamusoro keyboard, uye, pasina muchisunungura nayo, kuvaparadzanisa Chirungu tsamba "X".
Achipindura, zviripo vachaonekwa yepazasi rworudyi kukona chidzitiro "Start". Zvakakodzera kusarudza chinhu anozivikanwa "Mhanyai." Pashure paizvozvo uchatenda achida murayiro.
Apo "Mhanyai" iri Windows 8? Search ichangobva shanduro murayiro uyu kushandisa uchishandisa hurongwa inowanikwa. Kurongeka hazvisi sezvinotevera:
On huru "Metro" inowanikwa chidzitiro, achizviendesa bhatani "Program". It riri pasi kuratidzwa.
Pane zvakarongwa purogiramu, tinowana chinhu "Mhanyai" uye tinya pamusoro payo.
Anenge zvose zvinogona kumhanyira vachishandisa Mawindo "Mhanyai" iri Windows 8: chikwata kubva uchishandisa hurongwa, zvimwewo zvirongwa uye utilities. Iyi ndaza dzakakura chaizvo. Zvinosanganisira mirayiro maitiro akadai:
CMD - murayiro mutsetse.
Pakuvara mupepeti uchishandisa hurongwa yokunyoresa - REGEDIT.
Integrated fora MSPaint.
Browser, yakavakwa-mubrowser dzesangano «Microsoft» Internet Explorer.
A nyore chinyorwa mupepeti kupinda pamwero "nebhuku rokunyorera» - nebhuku rokunyorera.
Date uye Time - timedate.cpl. In hwindo ichi unogona kuchinja navo.
Logoff - logoff.
Firewall.cpl - the parameters of uchishandisa hurongwa firewall.
Taskmgr - mhanya Os Task Manager.
hdwwiz.cpl - mazita akagadzawo mano munyika.
Msconfig - kuitika hurongwa configuration.
Mukuwedzera pakuvara mirayiro uchishandisa hurongwa, uchishandisa mahwindo "Mhanyai" anogona kumhanya zvokunze mafomu, mashoko ose zviri yokunyoresa. Somuenzaniso, shoko iroro processor "Shoko" chinotanga Winword chikwata. Saizvozvowo, unogona kumhanya chero Browser, akadai "Opera". Mumwe inoda chete kutaipa zita rayo uye wokudhinda Enter. Kazhinji, saizvozvo unogona kumhanya chero chirongwa chero "windose" mhuri uchishandisa hurongwa.
The hwindo "Mhanyai" muna Windows 8, sezvo muzvirevo shanduro uchishandisa hurongwa, kunoita kuti aite zvakasiyana siyana mirayiro. Pasina zvakaoma kupa renguva pamwero kushanda munyika software. Nokuda chakakomba kubudiswa inowanikwa nzira nokuda nezvekutanga substantially wakashandurwa. Asi imwe nzira haana ndavhiyiwa kuchinja - mubatanidzwa kiyi "windose" uye tsamba Chirungu «R». Kuti inokurudzirwa kushandisa uchidzidzira.
Sei kugadzira nomumbure muna Windows 7
Error 492 apo kudhanilodha kubva "Market": zvikonzero uye nyore nzira kubviswa
Nokumhanya kombiyuta kunoenderana uwandu mashoko kupatsanurwa
Dzinorara kwenguva refu uye Kurara
Mune zvimwe zviitiko, Windows haaoni yakaoma tikachirega?
Basic Linux mirayiro
Morning munamato - Fajr: vangani rak'ahs nguva. Prayer muna Islam
Ndichimhanyira Weight Loss
Lina Arifulina - yakakurumbira mutambi, mugadziri, mukuru, munyori hutachiwana
How kuti korona kubva papepa duku muchindakadzi
Sei nzeve uye sei kubatsira pakugadzirisa dambudziko iri
Sei nokukurumidza uye zvakarurama kusona magwaro?
Windows 10 mushandisi nhoroondo sei kubvisa zvachose? How zvinomuomera kuikanganwa mukomana aishandisa nyaya omunharaunda musi Windows 10?
NecheSalvic mungano: shiri ine chiso chomunhu
Inofamba Switch chiedza: oparesheni, kugadzwa uye kuchinja
The jurors - ndiani ichi? Zvinofanira kusarudzwa uye murayiro
Kutsvaga AD Options: sei kubvisa